Amisom oo uga digay shacabka Muqdisho joogitaanka degaannada ay Al-shabaab ka taliyaan. – Radio Daljir
Amisom oo uga digay shacabka Muqdisho joogitaanka degaannada ay Al-shabaab ka taliyaan.
Muqdisho, May 14- Ciidamada nabad ilaalinta Amisom ee taageerada milatari Muqdisho imika ku siinaya ciidamada dowladda FKM ayaa dadweynaha ku dhaqan magaaladaas gaar ahaanna kuwa ku nool degaannada ay Alshabaab maamulaan uga digay joogitaanka degaannadaas, gaar ahaanna suuqa wayn ee Bakaaraha ee magaaladaasi.
Digniintan ayaa shacabka Muqdisho loogu gudbiyay warsaxaafadeed ay shalay soo saareen saraakiisha Amisom kaas oo shacabka loogu sheegey in ay ka fogaadaan suuqa Bakaaraha oo la sheego in uu yahay ubucda ugu wayn ee Alshabaab ee Muqdisho. Warsaxaafadeedkan ayaa lagu sheegey in looga gol leeyahay yaraynta khasaaraha shacabka soo gaadha, iyo sidoo kale in ciidamada Amisom oo garab siinaya kuwa dowladdu ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan fadhiisimada Alshabaab gaar ahaanna goobaha muhimka u ah ururkaas ee magaalada Muqdisho.
Afhayeen u hadlay ciidamada nabad ilaalinta Amisom Major Paddy Akunda ayaa warsaxaafadeedka ku sheegey in ay idleeyeen qorshe ay ku doonayaan in dowladda FKM ah loo soo gacan galiyo degaannada ay Alshabaab maamulaan ee Muqdisho. Akunda waxa kale oo uu sheegey in ay ciidmamada dowladda ee ay taageeraan ay gacanta ku dhigeen degaanno hor leh oo ka mid ah degmooyinka Hodan iyo Hawl-wadaag ee magaaladaas, goobahaas oo ay hore gacanta ugu hayeen Alshabaab.
Dagaallada ka dhaca Muqdisho ayaa in badan oo ka mid ah khasaaraha ka soo gaadha shacabka lagu eedeeyaa in ay gaystaan ciidamada dowladda iyo taageerayaashooda Amisom. Tallaabada milatari ee u qorshaysan Amisom waxa ay soo ifbaxaysaa maalin kaddib markii laba askari lagaga dilay dagaallada ka socda magaaladaas.
Maxamed Cabdi Kuuriya